ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs X | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs X
ယူကေ ရေကာတာ နဲ့ ဆည်များ – UK Dams and Reservoirs X
Posted by Kyaemon on Nov 2, 2012 in Business & Economics, Education, Entertainment, Environment, Know-How, DIY, Photography, Society & Lifestyle, Travel |6comments
uk UK DAMS UK TRAVEL
တောတောင်ချောင်းမြောင်း၊ ရေကန်ဆည်မြောင်း၊ လယ်ယာကိုင်းကျွန်း ကွင်းပြင်မြေပြန့် အနှံ့တို့ရဲ့ သဘာဝဝန်းကျင်အလှကို ရင်သပ်ရှုမော မြင်တွေ့ခံစားနိုင်တာပါ
Higher and Lower Chelburn ရေကာတာ ဆည် နှစ် ခုစလုံး က ၁၈၀၀ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ အံ့မခန်း လောက် အောင် (၂၁၂) နှစ်တောင်ကြာပါပြီ
chelburn reservoir images – Google Search
Higher Chelburn Reservoir | Flickr – Photo Sharing!
Panoramio – Photo of Lower Chelburn Reservoir Overflow
Just below Summit Lock Chelburn Bridge | Flickr – Photo Sharing!
Summit – Rochdale Canal, Chelburn Bridge | Flickr – Photo Sharing!
Summit – Rochdale Canal, Chelburn Bridge
Towpath up to the “Summit” the highest broad-lock in Britain.
Panoramio – Photo of Rochdale Canal, Summit
Higher & Lower Chelburn Reservoirs | Flickr – Photo Sharing!
View over Higher Chelburn Reservoir | Flickr – Photo Sharing!
File:Lower Chelburn Reservoir – geograph.org.uk – 1114383.jpg – Wikimedia Commons
Pennine Bridleway, Leach Hill | Flickr – Photo Sharing!
Pennine Bridleway, Leach Hill
A view over Higher Chelburn Reservoir from the summit of Leach Hill.
chelburn reservoirs – Flickr: Search
Search results for chelburn reservoirs
Flickr: Search MAYOR OF BOOTHTOWN’s photostream
Wimbleball ရေကာတာ က ၁၉၇၈ ကတည်ဆောက်ခဲ့လို့ (၃၄) နှစ်ကြာပါပြီ
Dam At Wimbleball Lake | Flickr – Photo Sharing!
Search results for wimbleball dam
ရေကာတာ ဝန်းကျင်မှာ လူတွေအပန်းဖြေပြီးသဘာဝဝန်းကျင်ရဲ့အလှကိုခံစားကြတာ
“နာလိမ့်မယ်” လို့သိရက်နဲ့ အမြင့်ကနေဒိုင်ဗင်ထိုးတာ
Wimbleball Dam, Exmoor
Wimbleball Lake – Dam
View from across the top of Wimbleball Lake’s dam
Wimbleball Reservoir (Lake) _MG_5400 | Flickr – Photo Sharing!
If you lean right over the edge of the dam (downward side) this is what you’d see. This is not however recommended, I carefully held the camara out over at arms length.
Wimbleball Reservoir –aset on Flickr
Wimbleball June 2008
၁၈၆၂ မှ ၁၈၈၀ ထိ ကာလအတွင်း ဆောက်လုပ်ထားပြီး ကြံ့ခိုင်တည်မြဲဆဲ ယူကေ ရေကာတာ ဆည်ကြီးများ ဇယား
(၁၃၂ နှစ် မှ ၁၅၀ နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိ ရေကာတာနဲ့ဆည်ကြီးတွေပါ၊ ယူကေနိုင်ငံအားအကျိုးပြုတုန်းဘဲ )
Doe Park n/s 1862 (၁၅၀ နှစ် ရှိပြီ)
Silsden n/s 1862
Earnsdale n/s 1863
Linacre (upper) n/s 1864
Grimworth n/s 1864
Horse Coppice n/s 1864
Swinden No 1 n/s 1864
Roddlesworth (upper) n/s 1865
Mitchells House n/s 1865
Kitcliff n/s 1866
Grizedale n/s 1866
Norman Hill n/s 1866
Piethorne n/s 1866
Poaka Beck n/s 1867
Walker Wood n/s 1868
Upper South Woodburn n/s 1868
Woodburn, Middle South n/s 1868
Stubden n/s 1868
Ingbirchworth n /s 1868
Agden n/s 1869
Strines n/s 1869
Fishmoor n/s 1869
Jack House n/s 1869
Swineshaw (higher) n/s 1869
Swineshaw (lower) n/s 1870
Brushes n/s 1870
Hanging Lees n/s 1870
Bottoms n/s 1871
Windleden (lower) n/s 1872
Dean Head (lower) n/s 1872
Waskerley n/s 1872
Dean Head (upper) n/s 1872
Gryfe No 1 n/s 1872
Gryfe No2n/s 1872
Barden (lower) n/s 1874
Nant Hir n/s 1875
Dale Dyke n/s 1875
Horton Bank n/s 1875
Lindley Wood n/s 1875
Cowm n/s 1875
Yarrow n/s 1875
Bollin Hurst n/s 1875
Swinsty n/s 1876
Wayoh n/s 1876
Ponden n/s 1877
Woodhead n/s 1877
Woodburn, Lower South n/s 1878
Lliedi (lower) n/s 1878
Riding Wood n/s 1878
Widdop n/s 1878
Water Sheddles n/s 1878
Ogden (Milnrow) n/s 1878
Pant-yr-Eos n/s 1878
Naden Middle n/s 1878
Leeming n/s 1879
Copeland n/s 1879
Gladhouse n/s 1879
Tunstall n/s 1879
Stantling Craigs n/s 1879
Pennington n/s 1879
Leeshaw n/s 1879
Rosebery n/s 1880
Glensherup n/s 1880
Edgelaw n/s 1880
Dean Clough (lower) n/s 1880
Yeoman Hey n/s 1880 (၁၃၂ နှစ်ရှိပြီ)
ဦးမာဃတို့ မြန်မာနိုင်ငံကဆည်တွေ ဘယ်လောက်ခံမလဲဆိုတာတွေးမိတယ်။
သူတို့ထက် ပိုပြီး ကျော်ကြားနိုင်ခြေလဲ ရှိလောက်ပါတယ်နော
မြန်မာက ဘာလုပ်လုပ် တိတ်တ်ိတ်ဆိတ်ဆိတ်မှ မရှိတာလေ
တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သိပ်မကွာလှပါဘူး … နော် … ဟုတ်တယ်မလား
တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ် ပိုင်ဆိုင်မှု သန်း ၂၇၀၀ ဟုဆို
Browse › Home › နိုင်ငံတကာသတင်း » တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ် ပိုင်ဆိုင်မှု သန်း ၂၇၀၀ ဟုဆို
တရုတ် အစိုးရ မီဒီယာ တွေက မကြာခဏ ဆိုသလို ဖိုးဖိုးဝမ်လို့ ညွှန်းဆို ပြောဆို ရေးသား ကြတဲ့၊ တခါ ငလျင်တို့၊ ရေကြီး တာတို့ သဘာဝ ဘေးအန္တာရာယ် ကျရောက်တဲ့ အခါ လူထုဆီ ချက်ချင်း ဆိုသလို ရောက်သွား တတ်လို့ လူစာနာ ခေါင်းဆောင်ကြီး လို့ ပုံဖော် ထားတဲ့ တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ်ကို အမေရိကန် သတင်းစာ တစောင်ဖြစ်တဲ့ နယူးယောက် တိုင်းမ်က အခုလို ထုတ်ဖော် ရေးလိုက် တဲ့အတွက် တရုတ် အစိုးရက တော့ တကယ့်ကို ဆတ်ဆတ်ခါ သွားပါတယ်။ —http://www.thithtoolwin.com/2012/10/blog-post_27.html#.UJSI1KDAFip
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ပုန်းများ ရှာဖွေ
တည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ နောက်ထပ်ပြဿနာတွေမဖြစ်အောင်လို့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တဝှမ်းမှာ နယ်မြေလုံခြုံရေးကို ပိုပြီးတော့ အရှိန်အဟုန်မြင့်တင်းကျပ်ထားပြီး အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ လက်နက်ပစ္စည်းတွေ သုံးရက်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာကို အမြန်ဆုံး အပ်နှံဖိ်ု့ နိုးဆော်ထားပါတယ်။ ဒီလက်နက်တွေ အပ်နှံမှုမရှိပဲ သိမ်းဆည်းထားတာမျိုး ရှိမရှိကိုလည်း ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ မဆုမွန်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အခုဆိုရင် အကြမ်းဖက်မှု ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက ဒေသတချို့မှာ အခြေအနေတွေဟာ တည်ငြိမ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ နေရာတွေကို စစ်တပ်နဲ့ရဲလုံခြုံရေးတပ်တွေက တာဝန်ယူအုပ်ချုပ်နေပြီးတော့ နယ်မြေလုံခြုံရေးတွေကိုလည်း တိုးမြှင့်ချထားပါတယ်။
ဒေသခံတွေကိုလည်း နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ နိုဝင်ဘာလ ၃ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ ဓား၊ တုတ်နဲ့ လက်နက်တွေ အပ်နှံထားဖို့ နိုးဆော်ထားတယ်လို့ သံတွဲဒေသခံ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်ဇံလှက ပြောပါတယ်။
“အော်၊ဟုတ်ကဲ့။ ဟိုနေ့က သူတို့ မိုက်နဲ့ကြေညာတယ်လေ။ မိုက်နဲ့ကြေညာတော့ ဓား၊ တုတ် လက်နက်တွေကို သုံးရက်အတွင်းမှာ လုံခြုံရေးကို လာအပ်ပါဆိုပြီးတော့ ပြောတယ်လေ။”
ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာလ ၁ရက်နေ့က သံတွဲမြို့ထဲက ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ ဗလီကျောင်းတချို့ကို စစ်တပ်နဲ့ ရဲလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေက ရှောင်တခင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗလီကျောင်းတခုမှာ တုတ်၊ ဓားတွေ တွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ ကျောင်းဝင်းထဲမှာ နေတဲ့သူတချို့ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့ ရဲစခန်းမှာ လက်ရှိချုပ်နှောင်ထားတယ်လို့ မူဆလင်ဘာသာဝင် သံတွဲဒေသခံ ဦးကျော်ဇံလှက ပြောပါတယ်။
“ ပထမနေ့က ဂျာမဲ့ဗလီကို သွားပြီးတော့ သူတို့ စစ်တာပေါ့နော်။ ဂျာမဲ့ဗလီကို စစ်တဲ့အခါကျတော့ အဲ့ဒီ့မှာ တုတ်၊ ဓားတွေ တွေ့တယ်ဆိုပြီးတော့ ဗလီဆရာနဲ့ ဂေါပကဥက္ကဌရယ် နောက် ဗလီမှာ အိပ်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရယ်၊ လေးယောက်စလုံးကို ဖမ်းသွားတယ်လေ။ အာမခံမပေးဘူး။ ဟုတ်ကဲ့”
အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့ ရခိုင်ပြည်နယ်နယ်မြေလုံခြုံရေးကို စစ်တပ်နဲ့လုံခြုံရေးတပ်တွေက တာဝန်ယူထားတဲ့ အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက် နယ်မြေတည်ငြိမ်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ ဒီဒေသတွင်း အမိန့်ထုတ်ပြန်မှုတွေကိုတော့ စစ်တပ်ကနေ တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးတာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြိုင်ကပြောပါတယ်။
“ အဲ့တာလည်း လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ဆိုတော့ ကျနော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးမှာတော့ မရှိပါဘူးခင်ဗျ။ လုံခြုံရေးအပိုင်းကတော့ သူ့ဘာသာသူ တပ်ပဲ။ နောက်ပိုင်း သတင်းရတဲ့အခါကျတော့ ကျနော်သတင်းထုတ်ပေးပါခင်ဗျာ။ လောလောဆယ်ကတော့ တက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုပဲ ကျနော်တို့ကပြောတယ်။ အဖြစ်မှန်ကိုပဲ တင်နေတာပေါ့။”
အခုလိုမျိုး အမိန့်ထုတ်ပြန်ရတာဟာ လူမျိုးစုတခုနဲ့တခုကြား အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေ မဖြစ်အောင်လို့ ထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်သန်းတင်က ဗွီအိုအေမြန်မာပိုင်းကိုပြောပါတယ်။
၁၈၇၈ ခုနှစ်၊ လက်နက် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄ (ဃ) တွင် အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆို ထားသည့် သေနက်၊ လှံစွပ်၊ ဓားလွယ်၊ ဓားမြှောင်၊ လှံ၊ လေးနှင့်မြား၊ ဂျင်ဂလိ၊ လက်နက်အစိတ်အပိုင်းနဲ့ လက်နက်ထုတ်လုပ်တဲ့ ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေ အားလုံးကို နီးစပ်တဲ့ ရဲစခန်း၊ လုံခြုံရေး အဖွဲ့တွေဆီကို အမြန်ဆုံး အပ်နှံကြကြဖို့ကို သတ်မှတ်ရက် ပေးထားပြီးတော့ နောက်ပိုင်းမှာ ရန်ပြုလိုသော စိတ်ဖြင့် အဆိုပါလက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားတာကို တွေ့ရင် ဥပဒေနဲ့အညီ ထိရောက်စွာ အရေးယူမှာဖြစ်တယ်လို့ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သက်ဆိုင်ရာက အမိန့် ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ဒီလိုအကြမ်းဖက် နောက်ကွယ်ကနေ ကြိုးကိုင်လူပ်ရှားနေတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကိုဖော်ထုတ်ပြီး ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ် လို့လည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးက အောက်တိုဘာလ ၃၁ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ အမိန့်ကြေညာချက် အမှတ်(၂/၂၀၁၂)မှာ ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ်။
” ဓါးဆိုတာကို ဘယ်လိုလုပ်အပ်ရမှာဒုံး မြန်မာပြည်မှာ အိမ်တိုင်းဓားရှိတယ်
လျှပ်စစ်မီးမရှိတဲ့ဒေသမှာ ဒုတ်ဆိုတာ ထမင်းချက်လို့ရဒဲ့ဥစ္စာ ”
ကျုပ်ဒို့ မြစ်ဆုံ ရေဂါဒါ ပြီးဒဲ့အခါကျမှ သိမယ်
ကြေးမုံဂျီး အိမ်မှာဆို တရုတ်ပြည်လုပ် အေကေ၄၇ မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်တောင် ရှိသဗျ။ ဒုံးပျံကတော့ သီတင်းကျွတ် မီးထွန်းပွဲမှာ သုံးလိုက်ပြီတဲ့… :harr: